Kooxda Barcelona oo xaqiijisay in mid ka mid ah xiddigaheeda uu muddo Shan todobaad ah garoomada ka maqnaan doono – Gool FM
Haaruun November 11, 2019
(Barcelona) 11 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaan heli doonin adeegga ciyaaryahan ka tirsan muddo shan todobaad ah, waxaana uu la maqnaan doonaa dhaawac.
Nelson Semedo ayaan garoomada dib ugu soo laaban doonin illaa sanadka 2020 kaddib markii dhaawacan uu dhaawac kubka ah ka soo gaaray intii lagu guda jiray kulankii Sabtidii ee Celta Vigo.
25-sano jirkaan ayaa la bedelay daqiiqaddii 23-aad kulankii ay 4-1 uga adkaadeen Celta, taasoo keentay in kooxda haysata horyaalka Spain inay ku laabato hoggaanka horyaalka La Liga ka hor ciyaaraha caalamiga ah.
Barca ayaa sheegtay in tijaabooyin isxig-xigay oo lagu sameeyey Semedo, isla markaana laga marsiiyey kubkiisa lagu ogaaday inuu muddo dheer garoomada ka maqnaan doono.
“Tijaabooyin lagu sameeyey ciyaaryahanka kooxda koowaad ee Nelson Semedo ayaa lagu xaqiijiyey in uu dhaawac ka qabo kubka lugtiisa bidix, waxaana uu garoomada ka maqnaan doonaa muddo lagu qiyaasay shan isbuuc” ayuu u dhignaa bayaan ka soo baxay kooxda oo lagu daabacay Website-kooda rasmiga ah.
Barca ayaa horyaalka La Liga ku wajihi doonta Leganes, Atletico Madrid, Mallorca, Real Sociedad, Real Madrid iyo Alaves ka hor fasaxa qaboobaha, marka lagu daro kulammada Champions League ee ay la kala ciyaarayaan Kooxaha Borussia Dortmund iyo Inter Milan.
Semedo kaasoo sanadkii 2017 ka soo dhaqaaqay Benfica ayaan seegin hal kulan oo ay ciyaareysay kooxda Barca xilli ciyaareedkan, waxaana uu u sameeyey saddex caawin 16 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan.